लाहुर हिँडेको बाटोबाटै शिक्षक « Naya Page
लाहुर हिँडेको बाटोबाटै शिक्षक
प्रकाशित मिति : 24 March, 2018 1:31 pm
सम्बत् २०२२ सालको भदौ महिनाको बेला धरान घोपा क्याम्पमा क्लर्कको भर्ती खोलिएको छ भनेर थाहा भयो । यस्तो भर्ती अरु जि.डि. (General Duty) को जस्तो गल्लावाल मार्फत् नभएर आफै सम्पर्क राख्नुपर्दथ्यो । अब म धरान घोपा क्याम्पमा क्लर्कमा भर्ती हुन जान्छु भन्ने कुरा काकालाई सुनाउँदा उहाँ एकछिन अकमक्क पर्नुभयो । मेरो कामकुरो देखेर स्कुलका विद्यार्थी, अभिभावकहरुसँगको सम्पर्क हेरेर अनि आफै रमाइरहेको बुझ्दा काकाले मलाई त्यहाँ दुई चार वर्ष रहला भनेर ठान्नुभएको रहेछ ।
काका आफै पनि पल्टने हुनुभएकोले पल्टनको आकर्षण सबैलाई एकपटक हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुभएकै थियो । त्यसमा पनि ब्रिटिस सेनाको ‘बाबुजी’ (क्लर्क) पदमा भिड्ने भनेपछि उहाँले मलाई जान मञ्जुर गर्नुभयो । जाने बेलामा मलाई भन्नुभयो, ‘कान्छा, तपार्इंको त अंग्रेजी राम्रो छ, त्यसै पास गर्न सक्नुहुन्छ । पल्टनमा हेडक्लर्क भनेको ठूलो अफिसर हो । तपाईं हेडक्लर्ककै पनि हुनुहोला । हामीलाई सम्झनु है, नबिर्सनू ।’ आफ्नो आमा सानैमा बितेपछि आमाका बहिनीहरु (छ्यामाहरु) ले माया गर्दा आमाको ‘तिर्सना’ मेटिन्थ्यो । अनि हात्तीपाइलेमा पनि छ्यामा साइँलीले त्यसरी नै माया गरेर राख्नुभएकोले छुट्टिने बेलामा उहाँहरुको आँखामा हेर्न सकिनँ । मैले भुइँ हेरेरै बिदा लिएँ, र घर आएँ । त्यसपछि काका र छ्यामासँग कहिल्यै भेट भएन ।
भोर्लेनीको उकालो र नाम्जेको चुचुरो सम्झेर मेरो नौनारी गलेर आयो । राती निन्द्रा राम्ररी लागेन । भोलि बिहान अन्तिम नामावली प्रकाशन भयो; मेरो नाम त्यहाँ थिएन । अब के गर्ने ?
फेरि अर्कोपल्ट घोपा क्याम्प पसेँ
मेरो मनमा एउटा नौलो आशा र उत्साह पलाइरहेको थियो भने अर्कोतिर आफूले लाएको खेतीपाती, आफूले स्याहार गरेको फूलबारी यसरी चटक्क छाडेर जानुपर्दा मन भारी पनि भइरहेको थियो । हङकङ जाने लाहुरे भएर, त्यसमा पनि बन्दुक बोकेर जंगल जाने होइन, अफिसमा बसेर टाई बाँधेर टाइपराइटरमा पटटट…अंग्रेजी पड्काउने सपनाले म निक्कै उचालिएको थिएँ । घर आएर एकरात मात्र बसेर बाटो लागिहालेँ । सम्बत् २०२२ सालको भदौ महिना थियो, गते बिर्सेँ । घरबाट हिँडेको दिन ६ नम्बर बुधबारे नाघेर मुढे भन्ने गाउँमा बास बस्न पुगेँ । धनकुटा जिल्लाको पूर्वी सिमानामा रहेको यो एउटा ठूलो मगर बस्ती हो, जहाँ बास पाउन सजिलो थियो । कुनै घरमा भात पनि पकाइदिन्थे भने कुनै घरमा आफै पकाएर खानुपर्दथ्यो । आफूले पकाउँदा दाउराको अलिकता पैसा दिनुपर्दथ्यो भने उनीहरुले पकाइदिएमा खानाको पैसा लिन्थे जो शहरको तुलनामा अत्यन्त थोरै हुन्थ्यो ।
भोलिपल्ट म धरान लगभग चारबजेतिर पुगेँ । क्याम्पभित्र घ्याङघर (धर्मशाला) थियो । म त्यही गएर बसेँ । आफन्त कोही थिएनन् अनि होटलमा बस्ने कुरै भएन । भोलिपल्ट आठ बजेतिर आफ्नो सर्टिफिकेट च्यापेर अफिसतिर लागेँ । त्यहाँ म जस्तै थुप्रै जवानहरु भेला भएका रहेछन् । चिनापर्ची गरियो, एकजना मित्र काठमाडौंबाट आएका रहेछन् भने म मात्र एकजना पहाडे । तिनताका ‘पहाड’ भन्नाले लगभग नेपाल र ‘पहाडे’ भन्नाले नेपालका पहाडी भागमा बस्ने मानिसहरु बुझिन्थे । हाम्रो परीक्षँ मौखिक र लिखित दुवै खाले थिए ।
दार्जीलिङबाट आउने उम्मेदवारहरु पि.यु.सि., आइ.ए. पास अनि बि.ए.पढ्दै गरेकाहरु पनि थिए, र उनीहरुको योग्यता र फूर्तिफार्ती देख्दा म खुम्चिन्थेँ । पहाडे भएकाले पेन्ट कमिज भए पनि उनीहरुको जस्तो स्तरीय थिएन, र उनीहरु सबैको खुट्टामा छालाका जुत्ता थिए भने मेरो त रातो क्याम्पिस (क्यान्भास)को जुत्ता थियो । म गफगाफ गर्न पनि जान्दिनथेँ । हामी सबैलाई ब्यारेकमा नै राखिएको थियो । त्यसैले हामी एकअर्कालाई सम्पर्क गर्न सक्थ्यौं । परीक्षा कस्तो भयो अनि मौखिक परीक्षामा के कस्ता प्रश्न सोधिए भनेर कुरा चल्थ्यो । साथीहरुको कुरा सुनेर आफू पास भइएला जस्तो लागेको थिएन मलाई । लगभग दश दिनभित्र मौखिक र लिखित दुवैको परीक्षाफल प्रकाशित भयो । लगभग डेढसय परीक्षार्थीमा पैतीसजना पाए भए । मेरो पनि नाम आयो । म दङ्ग परेँ ।
अब हामी सबैको स्वास्थ्य परीक्षा हुने भयो । दोश्रो दिनमा मेरो पालो थियो । एक्स–रे, थुक–खकार, रगत, दिसापिसाब आदि सबैको परीक्षण भयो । मेरो कतै खोट देखिएन । अन्तमा आँखाको परीक्षा थियो, तर ढुक्क थिएँ, किनभने यसपाल त चश्मै लगाएर चार्ट पढ्न पाइने थियो । मेरा केही साथीहरुले पनि चश्मा लगाएकै थिए । बि.एम.एच (British Military Hospital) को एउटा कोठामा झुन्ड्याइएको चार्ट पढ्न लगाइयो मलाई । मैले केवल दुई हरफ मात्र पढ्न सकेँ । त्यसपछिका सबै अक्षरहरु बोलेनन् मसित । मैले निक्कै कोशिस गरेँ, तर…..। मलाई टेस्ट लिने श्वेतवस्त्रधारी सरले पनि निक्कै सहानुभूतिपूर्वक मलाई घरि–घरि दोहो¥याउन लाउनुभयो । अलिअलि यसो मेलोमेसो पनि देखाउनुभयो । उहाँले दिनुभएको ‘क्लु’ काम लागेन मेरो आँखालाई । म फेल भएँ भन्ने कुरा तुरुन्त थाहा भयो, म त्यो कोठाबाट बाहिर आएँ । मेरो अनुहार र शरीरभरि पसिना आएको थियो । आँखाको टेस्ट भएकाले आफैले आफूलाई अनुत्तीर्ण भएको कुरा थाहा भयो । म मरेजस्तै भएँ; जमिन भाँसिएको हो कि जस्तो भान भयो । हामी बसेको ब्यारेकमा कसरी कति बेला आइपुगेछु; थाहा भएन । एउटा दार्जीलिङ्गे साथीले सोध्यो ‘के भयो सोम ?’ म अलमल्ल परेँ । एकछिन पछि सबै कुरा बताउन कर लाग्यो । अर्को साथीले अलि ढाडस दिएर भन्यो, ‘केही छैन सोम, सुर्ता नगर । तिम्रो त आफ्नै घर होला; आफ्नै जग्गाजमिन पनि होला; खेतीपाती गरेर खाने नि यार ।’ अर्को एक हाउडे साथीले भन्यो– ‘आम्मामा…सोमको चश्मा त भयङ्कर र’छ नि होउ..यार, पल्टन नलागेर के भयो र ! पहाडतिर त टिचर काम पनि पाइहालिन्छ नि !’ मैले म आफै हेडमास्टर थिएँ भन्ने कुरा भने बताइनँ किनभने आइ.ए., बि.ए. पढेका फूर्तिवालाहरुको अगाडि म खुम्चिएर कमै बोल्थेँ ।
त्यसदिन मलाई भात खान पनि मन लागेन । हामीलाई दिइएको मिस्टिनमा चौकामा गएर भात थापिखाने र मगमा चिया खानुपथ्र्यो । धेरैबेरपछि गएर खाना थापेँ, र थोरै खाएँ । खाने मन त थिएन, तर यसो सोचेँ, भोलिदेखि त मग, मिस्टिन र कम्बलहरु बुझाएर उकालो लाग्नुपर्छ । भोर्लेनीको उकालो र नाम्जेको चुचुरो सम्झेर मेरो नौनारी गलेर आयो । राती निन्द्रा राम्ररी लागेन । भोलि बिहान अन्तिम नामावली प्रकाशन भयो; मेरो नाम त्यहाँ थिएन । अब के गर्ने ? एक प्रकारले हिजै थाहा भएकाले म अलि स्थिर भएँ । पास हुने साथीहरु फुरुङ्ग थिए । हुने नै भए ।
म सरासर हेडक्लर्क कहाँ गएँ
‘पक्की बात’मा एउटा उखान छ; ‘मरता क्या नही करता ।’ हुन पनि हो; यसै फेल उसै फेल । यतिका दिनभित्र, यताउति गर्दा, अनि मौखिक परीक्षा दिनमा पनि देखिरहेको एउटा गोरो, अग्लो मान्छे हेडक्लर्क भन्ने थाहा थियो । उहाँको नाम लेफ्टिनेन्ट हरिकान्त राई थियो । एउटा पल्टनमा एक जना मात्रै हेडक्लर्क हुन्छ अनि ऊ ठूलो मान्छे हो भन्ने पनि सुनेकै थिएँ । यताउति नसोचेर, जे त होला भनेर म सरासर उहाँको अफिसमा पुगेर ढोकामा उभिएँ । मलाई देख्नुभयो उहाँले; मैले भित्र पस्ने अनुमति मागेँ । कताकता डर, संकोच र धक लागेर आयो । उहाँको अनुहार हेरेँ; सफा आकाशजस्तो, कुनै आक्रोश वा आश्चर्य थिएन उहाँको आँखामा । म अलि आश्वस्त भएँ अनि भनेँ, ‘सर म क्लर्कमा फेल भएँ; टिचरमा जान चाहन्छु ।’
मेरो नियुक्तिपत्र दिँदै भन्नुभयो– ‘अब उ त्यहाँ डिपोट हाइस्कुल छ; त्यहाँ काम गर्ने अनि एक दुई वर्षपछि भ्याकेन्सी खुलेपछि हङकङ जाने ।’ म अलि हच्किएँ ।
अब उहाँ अलि हच्किनुभयो । ‘भाइ टिचर हुनलाई त ट्रेनिङ पो चाहिन्छ त !’ मैले भने, ‘मैले टिचर ट्रेनिङ गरेको छु सा’ब ।’ उहाँले सोध्नुभयो– ‘सर्टिफिकेट खोई त ?’ मैले भनेँ– ‘पहाडमा छ सा’ब ।’ ‘कहिले ल्याउन सक्छौ त ?’ भनेर उहाँले सोध्नुभयो । मैले ‘चार पाँच दिनमा ल्याउन सक्छु सा’ब’ भनेँ । उहाँले ‘ल त्यसो भए लिएर आऊ’ भन्नुभयो । त्यसैदिन आफ्नो साथमा रहेको मिस्टिन मग र कम्बल आदि बुझाएर म लागेँ उकालो ।
दोहोरो पाँच दिनको बाटो तीन दिनमा घर पुगेर ल्याएँ आफ्नो टिचर ट्रेनिङको सर्टिफिकेट । हेडक्लर्क लेफ्टिनेन्ट राईले मेरो सर्टिफिकेट ओल्टाइपल्टाइ हेर्नुभयो । मेरो अनुहारतिर हेरेर सोध्नुभयो– ‘के–के खेल खेल्न सक्छौ तिमीले ?’ मैले प्रायः सबै खेल खेल्न सक्ने तर फुटबल मन पर्ने बताएँ । आफ्नो स्कुलको टिममा खेलेर प्रायःजसो अन्य स्कुलहरुलाई जितेको सम्झेर अझ मन दह्रो भयो । नर्मल स्कुल (टिचर ट्रेनिङ) मा प्रथम श्रेणी आएको त्यसमा पनि पि.टी., ड्रिल तथा खेलकुदमा ‘विशेषता’ प्राप्त गरेको मार्कसिट देख्दा उहाँलाई निक्कै प्रभाव परेछ कि क्या हो; अनि अलि सान्त्वनापूर्वक भन्नुभयो– ‘ल भोलि मेरो अफिसमा आउनू ।’ ‘धन्यवाद सर’ भनेर हात जोडेर म बाहिर आएँ । मेले संसारै जितेजस्तो लाग्यो ।
अब म टिचर भएँ
भोलि बिहान नौ बजेतिर उहाँको अफिस गएँ । उहाँले मेरो प्रमाणपत्रहरु पर्काइदिनुभयो त्यसपछि मेरो नियुक्तिपत्र दिँदै भन्नुभयो– ‘अब उ त्यहाँ डिपोट हाइस्कुल छ; त्यहाँ काम गर्ने अनि एक दुई वर्षपछि भ्याकेन्सी खुलेपछि हङकङ जाने ।’ म अलि हच्किएँ । मलाई त के सोच थियो भने अहिले नै तत्कालै अरु क्लर्कहरु जस्ते पल्टन गएर टिचर हुन पाउने होला । यसरी घोपा क्याम्पमा बसेर पछि मात्र जान पाउने कुराले म अलि खिन्न भएँ, तर के गर्नु र ! अँध्यारो मुख लगाएर पहाडतिर लाग्नु भन्दा त यो पनि ठिकै हो जस्तो लाग्यो मलाई । मैले कृतज्ञता व्यक्त गरेँ अनि फर्कें ।
(प्रा. राईको प्रकाशोन्मुख आत्मकथाकथाबाट)
‘प्रजातन्त्रवादी भनिने साथीहरु सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लाग्दा कहाँ थिए ?’
काठमाडौं, ४ चैत । नेपाल बार एशोसिएशनको कानूून व्यवसायीहरुको साझा र छाता संगठन हो ।
खिम पन्थी आजकाल धेरै अभिभावकको गुनासो हुन्छ मेरो छोराछोरी पढ्नमा भन्दा अरु नै कुरामा ध्यान
‘गोर्खाहरुको माग पेन्सनमा प्रतिशत बृद्धि होइन, पूर्ण समानता हो’
लामो समयदेखि आन्दोलनरत बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका निम्ति भन्दै बिहीबार (२३ फागुन